Miorina manodidina ny lemaka malaza Curragh, Newbridge dia manan-karena amin'ny kolontsaina, lova, fiantsenana ary fisarihana - manolotra zavatra ho an'ny rehetra. Miroboka ao amin'ny lova mpitaingin-tsoavaly Kildare manan-karena, misitrapo amin'ny fitsaboana antsinjarany ary mankafy karazana sakafo fisakafoanana mahazo loka.
Newbridge dia miorina eo an-tsisin'ny lemak'i Curragh ary fehezin'ny Bog of Allen sy Pollardstown Fen. Fantatra amin'ny fiompiana soavaly irlandey, fampiofanana ary hazakaza-tsoavaly ilay faritra ka tsy mahagaga raha tototry ny manodidina ny toeram-piompiana mpianatra ary koa ny Curragh Racecourse. Niitatra haingana ny tanàna taorian'ny nananganana ny Camp Curragh tao amin'ny 19th taonjato. Ny tanàna, amoron'ny reniranon'i Liffey, dia mety ho fanta-daza indrindra amin'ny maha-tranon'i Newbridge Silverware izay nanamboatra cutlery teto hatramin'ny 1934 ary tato ho ato izay manana ivon-toeram-pivarotana lehibe indrindra any Irlandy - Whitewater. Ireo tanàna mangina any Athgarvan, Kilcullen ary Allen dia eo akaiky eo ihany koa ary ny golf farany, ny Royal Curragh. Ary raha mihaino tsara ianao, ny Curragh Plains sy ny Hill of Allen akaiky dia mitantara angano momba an'i St Brigid, na Fianna ary Dan Donnelly.
Top fahitana any Newbridge
Newbridge Silverware Visitor Center dia paradisan'ny mpivarotra ankehitriny manasongadina ny Museum of Style Icons malaza sy ny Factory Tour tokana.
Lova sy tantaratrano fisotroana kafe
Natolotr'i Michelin traikefa ara-tsakafo izay manolotra sakafo matsiro amin'ny rivo-piainana milamina sy manintona.
Whitewater no ivontoerana fiantsenana israibe lehibe indrindra any Irlandy ary trano fivarotana lehibe 70 mahery.
Ivon-javakanto maro-fifehezana mampiseho teatra, mozika, opera, hatsikana ary zavakanto hita maso.
Zavatra tsara folo hatao manodidina ny tanàna Kildare sy Newbridge
Zavatra 10 mety tsy fantatrao momba ny Curragh
Dingana iray miverina amin'ny fotoana miaraka amin'ny The Museum of Icons
Hijery misimisy kokoa ao Newbridge
Lova sy tantaraCommunity
fiantsenanaManohana any an-toerana
Pubs & NightlifeNy fisakafoanana ivelany
Lova sy tantaraZavatra maimaim-poana hataotrano fisotroana kafe
Zavakanto & KolontsainaAndro orana
trano fisakafoananaSakafo mahazatra
Zavakanto & KolontsainaFianakaviana ankohonany
Edward Harrigan & Zanaka